I-Gym eQhelekileyo yokuThengisa ngokuShushu yezeMidlalo eQhelekileyo yeSweater Shirt Pullover ngeSoft Hand feel feel Manufacturer kunye neFektri | Lebang
Hoodies kunye neJacket
Ezantsi / ibhlukhwe
Ukuthengisa ngokuShushu kweGym esisiseko yeZemidlalo okuThungayo ijezi yehempe eneSoft Hand ukuziva
Isinxibo sabasetyhini kwiVelor Lon ...
Umyili wamadoda, Shicilela ...
Ihowuliseyili amadoda fashion plain ...
Ihowuliseyili amadoda fashion ukutsala ...
Kweli candelo uyakufumana Ihempe zamadoda ezilungele ukugqibezela iimpahla zakho zemidlalo okanye ukunxiba mihla le. Ufuna oluphi uhlobo? Ngaphandle kwethu ngaphandle?
Ngaba ufuna ilaphu lobuchwephesha okanye umqhaphu weklasikhi? Bhrawuza iwebhusayithi kwaye ufumane lonke ingqokelela yamadoda i-hoodies kunye ne-sweatshirts: zininzi iindlela ezahlukeneyo kunye neenguqu onokukhetha kuzo. kulungile ukugcina umzimba ufudumele, ngakumbi ngaphambi kokuba usebenze okanye wenze umthambo.
Ngelixa ukucaciswa kobuchwephesha kubenza bagqibelele kwezemidlalo, ingqalelo kwiinkcukacha kunye nezinto ezikhethiweyo zisenza zethu Ihempe zamadoda into engenakuphikiswa ekufuneka ibenayo kubo bonke abathandi bezemidlalo-chic. Lebang Uqokelele ingqokelela ekhethekileyo yee sweatshi eziqhelekileyo kuwe nakwizihlobo zakho zemidlalo ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezitayile. Ilaphu elahlukileyo esilisebenzisela iihempe ezinje, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabaxumi bethu, abanye abathengi bafuna ilaphu elikhanyayo, abanye banokuthi bathande njengobunzima, ke sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho lwabo.
Zip epheleleyo, iibhatyi zoboya obucacileyo, ezilungele iintsuku zokuqala ezibandayo zasebusika okanye ukuprinta ilogo yamadoda enemibala eqaqambileyo iihempe ezihamba kakuhle ngemibala eqaqambileyo kunye nemozulu engakhathaliyo yehlobo. Ukunxiba unyaka wonke kuya kuba lula njengokuthenga kwi-Intanethi. Fumanisa lonke uluhlu lweehood zamadoda kunye nezikhuselo zamadoda namhlanje!
Izinto eziphathekayo:100% ipholiyesta
Ubungakanani:XS-XXXL, sinokwenza ubungakanani njengesicelo sakho
Umbala:Yenza njengoko ubuzile, bomvu, mhlophe, luhlaza, njl. Njengezicelo zakho.
MOQ:50pcs, Unako ngokusesikweni isampuli ukukhangela umgangatho
Ilogo:Logo 1.Printed 2. ezimfakamfele 3.Jacquard / logo ebhalwe, njalo njalo.
Uyilo lwakho luyafumaneka.
Ixesha lokuzisa:Ixesha Sample: iintsuku 5-7; ixesha isambuku: iintsuku 20-25
Uhlobo lonikezelo: 1I-5years yenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM
Immimiselo yokuhlawula:T / T, L / C.
1. Ngaphezulu kwe-100KGS: Elwandle okanye ngomoya
2. Ngaphantsi kwe-100KGS: Ngokucacisa, umnyango nomnyango wenkonzo
3. Ngokwesicelo somthengi.
Egqithileyo Eyona bhulukhwe yeVelvet yokufumana iNcinci
Okulandelayo: Ihowuliseyili amadoda fashion pullover ihempe
Hoodies ngentando yakho
Simahla Akukho mlinganiselo ILogo On Hoodies
Amadoda alima iiHoodies
IPatchwork Pullover Hoodies
Abafazi Velor Long sleeve enemikhono Zip Up Ho ...
Ihowuliseyili amadoda fashion plain pullover hoodies MH001
Ihowuliseyili amadoda fashion pullover ihempe ...
Ihowuliseyili amadoda fashion plain pullover hoodies MH002
Isinxibo seWomens Velor Sleeve Sweatsuit Z ...
ukubuza ngoku Thenga ngoku
INanchang Lebang Garment Co, Ltd.